Gore reJubheri reTeresian. 5 nhetembo dzaTeresa de Jesús pazuva rake rekuzvarwa | Zvazvino Zvinyorwa
Isu tiri pakati pekutanga Teresian Jubheri, iyo yakatanga musi waGumiguru 15 wegore rapfuura (mabiko e Teresa Mutsvene waJesu), uye ichagara kusvika Gumiguru 15, 2018. Uye nekutsanangura Enrique IV, kushanya ku Avila mashoma anogara akakosha. Asi kana tichidawo gore rino kufadza kwaMwari kuburikidza nemusande, kuchine zvimwe zvikonzero zvekuyambuka madziro uye nekudya steak sechivi chekupedzisira chekukara kukanganwira. Chii chisingaregererwi kusave kuverenga Teresa de Cepeda y Ahumada, uyo akazvarwa pazuva rakaita nhasi ye1515.
Asi muhupenyu huno zvese zvine mushonga kunze kweiyo Grim Reaper, sekuziva kwedu tese. Saka kubva pano, uye mundangariro yake, ini ndinosarudza izvi 5 nhetembo kuti Chiremba weChechi akatisiya, kunonyanyisa kutaurwa kwenhetembo dzakavanzika.
1 Pfupiso pane Teresa waJesu
2.1 Anoda colloquium
2.2 Hapana chiri kukukanganisa
2.3 Ini ndinogara ndisingagare mune yangu
2.4 Kwayedza iri kuuya
2.5 Wakakomborerwa moyo murudo
Pfupiso pane Teresa waJesu
Hupenyu hwaSaint Teresa uye shanduko yake yemweya inogona kuteverwa kuburikidza nemabasa ake ehupenyu seakadai Hupenyu, Hukama hwepamweya kana the Nheyo bhuku (iyo yakatanga muna 1573 ikaburitswa muna 1610). Kune zvekare avo angangoita tsamba mazana mashanu. Yakavambwa iyo Kurongeka kweVakadzingwa maKarimeri uye aive zvakare mushanduri wayo mukuru pamwe neSan Juan de la Cruz. Zvakare akanyora Nzira yekukwana, Dzimba o Inner castle.
Aigara achinyora nhetembo nguva nenguva, rakafemerwa nhetembo dzehufundisi nedzemabhuku yaakadzidza pahuduku hwake. Ipapo aifarirawo chivalric mabhuku. Ini ndinosarudza aya mashanu ayo ari angu chaiwo andinofarira.
Kana rudo rwauinarwo kwandiri,
Mwari wangu, zvakafanana neiya yandiinayo,
Ndiudze: ndinomira kupi?
Kana iwe, chii chauri kumira nacho?
-Alma, chii chaunoda kwandiri?
-My God, hapana kupfuura kukuona iwe.
-Uye chii chaunotya zvakanyanya nezvako?
-Chinhu chandinotya zvakanyanya kukusunungura iwe.
Mweya wakavanzika muna Mwari
Chii chaunofanirwa kushuvira,
asi kuda uye kunyanya kuda,
uye murudo zvese zvakavanzika
kukudzosera kune rudo?
Ndinokumbira iwe rudo runogara,
Mwari wangu, mweya wangu unawe,
kugadzira dendere rinotapira
uko inokodzera zvakanyanya.
Hapana chiri kukukanganisa
Usarega chero chinhu chichikukanganisa;
inosvika pane zvese.
Ndiani ana Mwari,
Mwari ega ndiye akakwana.
Ini ndinogara ndisingagare mune yangu
uye saka hupenyu hwepamusoro ndinovimba
kuti ndinofa nekuti ini handife.
Ini ndotogara kunze kwangu,
mushure mekufa nerudo,
nekuti ndinogara muna She,
kuti aindida iye pachake;
moyo wangu paakamupa akaisa chiratidzo ichi pandiri:
"Kuti ndinofa nekuti ini handife."
uye nerudo rwandinorarama,
anoita Mwari wangu musungwa wangu
uye usunungure mwoyo wangu;
uye inokonzeresa kuda kwakadai mandiri
ona Mwari wangu musungwa,
O, hwakareba sei hupenyu uhu!
jeri rino nezvisimbi
mweya unobatanidzwa chii!
nekuti kufa, chinosara,
asi kurarama nekunakidzwa?
kufa, kwandinoda kwauri.
Kwayedza iri kuuya
My gallejo, tarisa ndiani arikudana.
-Ngirozi dziri, kuti mambakwedza ari kuuya.
Yakandipa hukuru hukuru
zvinoita kunge cantillana.
Tarisa maBras, kwatova masikati,
rega tione zagala.
Uri hama here kuna meya,
kana kuti ndiani musikana uyu?
-Ndiye mwanasikana waMwari Baba,
Wakakomborerwa moyo murudo
kuti muna Mwari chete vakafunga;
nekuti iye anosiya zvese zvakasikwa,
uye maari anowana kubwinya kwake uye kugutsikana.
Kunyange iye amene anogara asina hanya,
nekuti Mwari wake ndiye ane chinangwa chese,
uye tichifara uye tichifara kwazvo
mafungu egungwa rino dutu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Gore reJubheri reTeresian. Nhetembo shanu dzaTeresa de Jesús pazuva rake rekuzvarwa